IWordPress: Iposi ehambelana nayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 1, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukuba usebenzisa iWindowsPress, enye yeeplagi zakho ezifunekayo kufuneka ibe Post enxulumene Faka iplagi. Oko kwathethi, ndiqaphele ukuba umthamo wamagama aphambili awayethunyelwa kunye neDaily Reads yam yayizinyanzela iziphumo zePosi ezihambelanayo.
Kananjalo, bendimangalisiwe ngokwenene ukuba iplagi yeZithuba eziDibeneyo inikezela kuphela uluhlu lwezithuba ezinxulumene noko phambi kokuba iposti oyifundayo! Ungathini ukuba utshintshe ingqondo (njengoko ndihlala ndisenza!)… Akufuneki ubonelele ngezithuba ezikhutshwe emva koqobo kodwa zisanxulumene?
Ngenxa yoko, ndenze ukulungisa okuncinci kwiplagi. Kuqala, ukulungiselela ukubhekisa kwizithuba zombini ngaphambi nasemva kweposi yangoku, nditshintshe umgca 91 ukusuka:
. "KUNYE neposi_yomhla> = '$ ngoku'" ukuya (KUHLAZIYWE: 11/15/2011):. Msgstr "KUNYE neposi_yomhla! = '$ Ngoku'". "NOMHLA WOKUPHOSA <= UMHLA" ()
Okwesibini, ukufundwa kwemihla ngemihla kwibhlog yam kuthunyelwe ngokuzenzekelayo nguDel.icio.us phantsi koMbhali othile (ukuze ndingaze nditshintshe ipasile kwaye ndophule ukuthunyelwa okuzenzekelayo). Ukwenza oku, ndongeze nje enye iparameter yombuzo ukushiya umbhali kwizithuba ebezikhangelwe ngokufaka lo mgca ulandelayo emva komdlulileyo:
. "KUNYE post_author! = 4"
Ndifumene inombolo yombhali ngokuyijonga nje kuBasebenzisi bam. Kungcono ndingazenzi izinto zibe nzima ngokudibanisa nenye itafile- inokunciphisa isantya ekuboniswa ngaso ezi ziphumo kunye nokucothisa ixesha lomthwalo. Oko kuya kukhokelela ekubeni abantu bakhathazeke kwaye bahambe.
Izibonelelo zokuBonisa iZithuba eziNxulumene nazo
Izithuba ezinxulumene noko sisixhobo esimnandi kuyo nayiphi na ibhlog. Izithuba ezinxulumene noko zomeleza Iziphumo zeNjini yokuKhangela ngokukhulisa amagama aphambili kwiikhonkco, into ebalulekileyo yeeNjini zokuKhangela ze-algorithms.
Izithuba ezinxulumene noko azikho nje sem isixhobo, nangona. Izithuba ezinxulumene noko sisixhobo sokugcina esiza kugcina abasebenzisi kwindawo yakho. Banokungayifumani le nto bebeyikhangela apho bafika khona-kodwa ukuba ubanikezela ngesalathiso esongeziweyo, banokuhlala!
tags: Linganisa i-CPimyonoizithuba ezinxulumene
Icebo lokuphola. Khange ndiqonde ukuba iZithuba eziDibeneyo zikhetha kuphela ukungena kwebhlog kwangaphambili… kuya kufuneka ndiye ndihlelele iplagi. Enkosi ngeentloko phezulu kunye nemiyalelo 🙂
… Kwaye unyaka omtsha wonwabile!
Jan 3, 2008 kwi-4: 39 AM
Ukukhangela okuhle-nangona mna ndisebenzisa iithegi ezilula zezithuba ezinxulumene noko ngokusekwe kwiithegi, kodwa ndivuma ngokupheleleyo ukuba izithuba ezinxulumene noko ziyimfuneko.
wow .. eli liqhinga elicocekileyo. Nangona ndingenazo izithuba ezinxulumene ne-wasabi plug-in, ndinee-tag ezilula zokungena kwizithuba ezinxulumene noko kwaye ndiyaqikelela ukuba kufuneka isebenzise i-postdate efanayo <condition. Enkosi ngencam, mandikhe ndijonge ikhowudi yam eplagiweyo kwaye ndibone ukuba ndingayifaka na ukuze ndinike iziphumo ezingcono.
I-Chandoo, ii-tag ezilula azisebenzisi imeko ye-postdate- ndiyakholelwa ukuba yenza izithuba ezinxulumene noku zihlala, ngombono wephepha ngalinye (ngaphandle kokuba uvule i-cache). Ayisiyiyo eyona nto isebenzayo kwiserver, kodwa oko kuthetha ukuba iyakufumana eyona midlalo mihle, nokuba ibithunyelwe ngaphambi okanye emva kokuba iposti ijongiwe.
UDoug - uxolo ngokuhamba ngesihloko kancinci…
Akukho xhala, Stefano! Nina ninomdla wam! Ngoku kufuneka ndiye kukhangela iithegi ezilula!
Jan 5, 2008 kwi-10: 44 AM
Iposti enkulu! Kodwa ndifuna ukukhetha iinitshi ezimbalwa.
Ukuzithethelela kwakho(hayi) ukujoyina enye itafile”Kuba:
"inokunciphisa isantya ekuboniswa kwezi ziphumo kwaye icothise ixesha lokulayisha"
I-offbase kunye nomzekelo wokusebenza ngaphambi kwexesha okuthintela ukugcinwa, kwaye kulihlazo ukubona abantu abanabaphulaphuli abaninzi becebisa izinto ezinjalo kuba zisasaza ulwazi olungelulo.
I-SQL iyakujoyina othetha ngayo, ucinga ukuba izalathiso ezifanelekileyo ezikhoyo ziya konyusa ixesha lokuphendula kakhulu iikhompyuter. Kuya kufuneka ube neetoni kunye neetoni zendlela ngaphambi kokuba nabani na abone nokuba sisiqingatha sesibini somahluko. Ngoku ewe, ukuba uyazinyanzela ungabhala ubhala ngokwenyani ikhowudi ye-SQL eya kuthi yenze ngendlela eyoyikisayo, kodwa ukudityaniswa okongeziweyo kwidatha eneqhosha ayingomzekelo wayo.
Kananjalo, endaweni yokukhuthaza ukugqogqa iplagi yomntu epapashiweyo, ndingathanda ukukubona ukhuthaza ukuyiphucula kwaye usebenze ukuze ukomeleza kwakho kubandakanywe kwiplagi uqobo. Njengokuba kunjalo, unokufumana ezinye iikhowudi ze-amateur zokufaka utshintsho lwakho kwaye kamva uhlaziye kwinguqulelo entsha ye-plugin kwaye bayalukhulula utshintsho kodwa abakwazi ukubona ukuba kwenzeke ntoni. Utshintsho lwakho lulungile, kukulahleka nje kokusebenza, kodwa ezinye iihagi zinokubangela ukuba isiza siqhekeze ukuba uhlaziyo lwamva lweplagi esisiseko lusetyenzisiwe ngaphezulu kwento ebiwe.
IJMTCW. Gcina umsebenzi olungileyo kungenjalo. 🙂
Jan 5, 2008 kwi-11: 42 AM
Enkosi ngokuphendula-andiqinisekanga ukuba ndiyavuma, nangona. Khange ndikhawuleze ndilungiselele… enyanisweni, ndifumene eyona ndlela yokufumana yonke imisebenzi endiyifunayo ngaphandle kwesidingo sokwenza utshintsho olongezelelekileyo. Kwincwadi yam, kufanele ukuba ibe ngabo bonke abajolise kuko.
Ndatsho futhi ukuba nako kuchaphazela ukusebenza. Khange ndizikhathaze ngokuvavanya okanye ukuzama kuba bekungeyomfuneko ukuba ndinikwe indlela endiyilungiselele ngayo iplagi. Kwakhona-ndafumana i-100% yokusebenza endikudingayo ngaphandle kokwenza ukujoyina okanye ukongeza ii-index, njl.
Ndiyavuma nawe kwamanye amanqaku, nangona kunjalo. Ndingumntu onomdla wokuphinda ndipapashe iiplagi, ndiziva ngathi ndiyavezwa emsebenzini womnye umntu. Ndikhankanye ibhlog yombhali koku-ke mhlawumbi uya kuzithathela ingqalelo njengezinto eziza kukhutshwa kwixesha elizayo.
I-PS: Ukulungisa ukulungiswa! 🙂
@Douglas: Andiqinisekanga ukuba ndiyavuma, nangona. Khange ndisebenze ngaphambi kwexesha? Kwakhona-ndafumana i-100% yokusebenza endikudingayo ngaphandle kokwenza ukujoyina okanye ukongeza ii-index, njl.
Ewe, ndicinga ukuba ngumahluko phakathi komntu ojonga inkqubo evela kugqibelelo lomsebenzi wobugcisa kunye nobugcisa ngokuchasene nomntu osebenza ngokuzama ukuzama ukwenza into (kwaye andithethi loo nto ngokuhlekisayo; kuluhlu oluthile lokuposa ndidlala indima yeeleta ngokuchasene neyangaphambili
Iyafana nendlela umgcini zincwadi zemali okanye igqwetha elixelela umnini shishini “Andiyi kuyenza loo nto”Kunye nomnini-shishini, engabambeleli kuzo zonke izisombululo ezaziwa ngoochwephesha njengezinokubakho * ezinokuzihoya iingcebiso zabo kuba kubonakala ngathi ngumzamo omkhulu, kwaye ulima phambili. UThixo uyazi ukuba bendikhe ndanguye umnini-shishini ngaphambili kwaye ndaye ndalima ngaphambili ngokuchasene nazo zonke iingcebiso, nangona kuninzi kwishaneli yam kamva. 🙂
@Douglas: Ndiyinto enomdla wokuphinda ndipapashe iiplagi,…
Hayi, ayisiyiyo kanye le bendiyithetha. Into ebendiyithetha kukuba ekubeni ingumthombo ovulekileyo unokufaka igalelo kutshintsho lwakho kumbhali wokuqala kwaye baya kuyamkela, kwaye ungayenza ngokuthe ngqo ngokunxibelelana nokunikela. Ngoku ndisebenza njengomcebisi wentengiso kunye nomphumeleli wewebhusayithi yokushicilela i-niche kunye nokusetyenziswa Drupal yetekhnoloji yewebhu, kunye noluntu lwaseDrupal luhlala lunxibelelana nababhali be-plugin (iDrupal ibabiza ngokuba "ziimodyuli") kwaye inikezela ukunceda ukuphucula ezinye iimodyuli.
PS Enkosi ngokulungiswa kokuhlela.
Amanqaku amahle, Mike!
Ndingangxama nge-plugin ukongeza olo khetho "Kuphela bonisa iZithuba ngaphambi kokuBoniswa kwePosi". Ndicinga ukuba ukhetho lwesibini luyinto encinci kubhlog yam, kodwa ndiza kujonga kwaye ndiyibone inokuba ngumdla kumbhali.
@Douglas: Ndicinga ukuba ukhetho lwesibini kukugcina ibhlog yam…
Ewe ndiyavuma. Isivumelwano nangona!
Jan 5, 2008 kwi-10: 45 AM
Crud kwifomathi yangaphambili yezimvo! Ndinqwenela ukuba ube nokujonga kwangaphambili izimvo! '-)
UDoug-Ndingaphoswa yinto apha. Kubonakala ngathi
ayikuthinteli izithuba ezenziwe emva kwaloo post ukuba zingafakwanga, ngokoko kuthintela ukubandakanywa kwezithuba onokuba usetile ukuba zibekho epapashwe kwixa elizayo.
Ndiyathemba ukuba iyavakala kwaye siyabulela ngebhlog enkulu.
Ukufumana okuhle! Ndiqinisekile wonke umntu (obhala kwangaphambili) uyakuxabisa.
Ndiza kuhlaziya umbuzo eposini.
@Mike: Ewe, ndiyaqonda ukuba ngumahluko phakathi komntu ojonga inkqubo evela kugqibelelo lomsebenzi kunye nobugcisa ngokuchasene nomntu osebenza ngokuzama ukuzama ukwenza into ethile
Umahluko onomdla. Ngelixa kunokuba kuhle ukuba yonke into ibaleke kangangoko kunokwenzeka, kwiimeko ezininzi ezibonakala zingenakwenzeka. Ndizama ukufumana imali eseleyo kwinkqubo yam phakathi kwento endifuna ukuyenza kunye nokuba ingakanani i $ okanye ixesha eliza kuthatha ukuyifumana.
Ndizabalazela ukwenza ubuncinci obufunekayo ukufezekisa injongo endizama ukuyifezekisa. Ukuchitha ixesha elininzi akunakubiza mali.
Ngamafutshane, ngaphandle kokuba ilahleko ekusebenzeni ibonakale kwibhlog yam andizukuchitha ixesha elongezelelekileyo, ukuba kuyabonakala kunokuba ndingathatha isigqibo sokuba ixesha elongezelelekileyo liya kuba nesiphumo. Ukugqibelela akusoloko kusisixazululo esifanelekileyo.
@Dwayne: Ndizama ukwenza ubuncinci obufunekayo bokufezekisa injongo endizama ukuyifezekisa. Ukuchitha ixesha elininzi akunakubiza mali.
Ewe ukuhlala usenza ubuncinci kuthetha ukuba awufundi ubuchule obungcono obubangela ukuba uphinde ubuncinci amaxesha amaninzi kwixa elizayo kunokuba ukuvumele ukuba ukukuphephe, emva koko wenze impumelelo engeyiyo. Ewe, imisebenzi emininzi ayidingi mzamo ungaphezulu kodwa ndikhe ndabona abantu abaninzi bethatha iindlela ezimfutshane ezinje ngaleyo yexesha elidlulileyo kwaye bezingoyena mntu unemveliso kunye / okanye ubuncinci bokudala ixabiso endibaziyo (eminye yayo ngelishwa abasebenzi bam , yiyo loo nto ndiqwalasele ukusilela kwabo kwimveliso.)
@Dwayne: Ngamafutshane, ngaphandle kokuba ilahleko ekusebenzeni ibibonakala kwibhlog yam andizukuchitha ixesha elongezelelekileyo, ukuba kuyabonakala kunokuba ndingathatha isigqibo sokuba ixesha elongezelelekileyo liya kuba nesiphumo. Ukugqibelela akusoloko kusisixazululo esifanelekileyo.
Ndicinga ukuba uziphosile iingongoma zam. Kuqala bendisithi uDoug wayelungiselela ukusebenza okungaziwayo, hayi mna, kodwa okona kubaluleke kakhulu ukuba uza kuphumeza into enokonwaba enokubangela imicimbi yokulondolozwa kwexesha elizayo ngenxa yokulunga ungayipapashi ukuze isetyenziselwe abanye ngaphandle kokubachazela Uhlobo lweengxaki zokugcina ezinokubangela kamva.
Isimanga sekhomenti yakho kukuba ukuthatha indlela ekhawulezayo nelula kuhlala kuphelisa ukubiza ixesha elininzi kwixa elizayo xa ufaka uhlaziyo lokhuseleko kwiWindowsPress yakho, khulula ukusebenza kwakho okukhoyo kwaye uyibuyise. Ngoku une-haystack ngenaliti elahlekileyo kwaye ngoku kuyafuneka ujonge ukuba yayiphi na inaliti.
Ngaba uchitha ixesha elongezelelweyo kwintsebenzo? Bah, ngokubanzi ayimfuneko. Ukuchitha ixesha elongezelelekileyo kugcino? Ewe ihlala ihlawulela yona ekuhambeni kwexesha.
Ukusonga, ewe yimvelo yomntu ukugxotha izilumkiso zezinto ezingazange zibangele zintlungu. Yiva intlungu kanye kwaye uya kuba nakho ngakumbi ukuthobela ezo zilumkiso zabanye sele beziva ukuba zintlungu.
Inye into endifanele ukuyithetha; Ndicinga ukuba ukuqhekeza kukaDoug kunokuba yinto elungileyo yokongeza kwiWindowsPress, ubuncinci njengokhetho lomsebenzisi. Kubonakala ngathi kusisidenge ukukhawulela iiposti ezinxulumene nazo kuphela ezo zeza ngaphambili.
KUNYE, ndingathanda ukubuza uDoug ukuba athumele malunga nokuba iiposti zakhe zemihla ngemihla zithunyelwa njani ukusuka del.icio.us; Ingayinto enomdla leyo.
Ndivumelana nawe… kwaye nantsi indlela yokwenza iiposti zemihla ngemihla ezivela kuDel.icio.us. Yonwabele!
Heh. Eyona elungile! Ndicinga ukuba bekufanele ukuba ndiyifumene kuqala.
I-BTW, ndikuthumele i-imeyile yobuqu malunga nokuba ndikwi-Indy ngoFebruwari 16-19 malunga neveki edlulileyo kodwa andiva. Ufumene? (zive ukhululekile ukucima eli candelo lamagqabaza am.)
Epreli 6, 2008 ngo-11: 54 AM
Iposti enkulu, ndiya kuyenza i-tweak kwiplagi yam enkosi kwakhona!